राेचक Archives - Page7of 13 - Saptakoshionline
मोरङको लेटाङ नगरपालिका–३ मिलन चोकका २२ वर्षीय सुनिल राईले आफ्नै लिङ्ग काटेर दुई टुक्रा बनाएका छन् । परिवारका अनुसार कहिले काहीँ असामान्य व्यवहार देखाउँदै आएका राईले बिहीबार तरकारी काट्ने चक्कुले आफ्नै लिङ्ग काटेका हुन् । लिङ्ग काटेपछि अस्पताल पुर्याइएका राईलाई हाल वीपी कोइराला स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठानमको नर्मल वार्डमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी विश्व अधिकारीले बताए । उन...
प्रियङ्काको हट अवतार
केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा प्रियङ्का कार्कीको चर्चा छ । इन्स्टाग्राममा हट अवतारमा खिचिएका तस्बिर प्रियङ्काले धमाधम सार्वजनिक गरिरहेकी छन् । उनको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ । हालै उनले भैरहवा पुगेर खिचेका हट तस्बिर शेयर गरेकी छन् । तर, ती तस्बिरमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक प्रतिक्रिया छन् । कतिले उनको तस्बिरमा बढी सम्पादन गरिएको भन्दै कमेन्ट गरेका छन् भने कतिले सुन्द...
शुक्रबार, आषाढ १३, २०७६
फेसबुकमार्फत मायाप्रेम, अन्त्यमा पुरुषको पुरुषसगैं विवाह
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–१० का २० बर्षीय रुपक गिरी र काठमाडौंका १८ बर्षीय अनुभव दर्जी बिच समलिङ्गी विवाह भएको छ| सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमार्फत चिनजान भई मायाप्रेममा परेका उनीहरु एकअर्कालाई खुबै माया गर्दछन् । फेशबुकमै रुपकले अनुभवलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसको केही दिनमै अनुभवले पनि रुपकको प्रेमलाई स्वीकार गरे । त्यसपछि उनीहरुबीच आत्मियता बढ्दै गयो । निरन्तर फेशबुकमा भिडियो कल र फोन ...
गर्मीमा अनुहारको विशेष ख्याल राख्नुपर्दछ । गर्मीमा अनुहारको रोम छिद्र खुल्छ तर फोहोर जाने सम्भावना बढी हुने भएकाले अनुहारको बढी हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। १. अनुहार राम्रो राख्न अनुहारको प्रकृति अनुहारको डे, नाइट क्रिम प्रयोग गर्नुपर्दछ। गर्मीमा सन ब्लक क्रिमको प्रयोग गर्न बिर्सनु हँदैन। २. अनुहारको रोम छिद्रमा फोहर जम्मा हुने हुनाले बेलाबेलामा क्लिन्जिङ गरिहनुपर्छ। ३. घरमै पनि अनुहारलाई सफ...
साना बच्चा प्रायः रातको समयमा रोएको सुनिन्छ । बच्चा दिनभर सुतेर राति रुने हुँदा आमाले भने हैरानी भोग्नु परिरहेको हुन्छ । बाहिरी दुनियाँमा आइसकेपछि बच्चाले विभिन्न नयाँ कुराको अनुभव लिइरहेका हुन्छन् । आफ्नो वरिपरी दिनभर केही न केही गतिविधि हुने भएकाले बच्चा त्यतै अल्मलिन्छन् । तर, राति सुनसान हुने हुँदा उसले एक्लो महसुस गर्छ र रुन थाल्छ । बच्चाले सानैदेखि सपना देख्ने गर्दछन् । यही क्रममा कहिलेकाँ...
हाम्रो पृथ्वीमा जतिपनि सजिव बनस्पती छन् अधिकांशमा औषधीय गुण छ त केहीमा बिष । आज हामी फेरी अर्को जीवनबुटी औषधीय बनस्पति फलको कुरा गर्दै छौ । दम रोगदेखि माइग्रेन र क्यान्सरसम्म ठीक पार्ने यो हो रिट्ठाको दाना । रिट्ठा एक किसिमको फल हो जसलाई सुकाएर साबुन, डिटर्जेन्ट र श्याम्पू बनाउन प्रयोग गरिन्छ । रिट्ठा र त्यसको पाउडर पनि सजिलै पाइन्छ । यसको प्रयोग कपाललाई बलियो र कालो बनाउनका लागि गरिन्छ अनि यसल...
पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभाको पुरानो सदरमुकाम चैनपुर बजारमा पुरातात्विक महत्वका वस्तु भेटिएका छन् । त्यहाँ ६ सय वर्ष पुरानो इँटा फेला परेको जनाइएको छ । चैनपुर नगरपालिका–६ मा भेटिएको त्यो इँटा मल्लकालीन समयमा उत्पादन भइ प्रयोगमा आएको दावी गरिएको छ । स्थानीय नारायण श्रेष्ठको घरको पिंढीमा प्रयोग भएको इँटा १४ औंँ शताब्दीभन्दा अघिको रहेको इतिहासविद् डा।रमेश ढुंगेलले दावी गरेपछि यो विषय बाहिर आएको छ ...
स्टाइलिस देखिन कपाल एकदमै महत्वपूर्ण पाटो हो । कपालको सुन्दरताले मानिसको व्यक्तित्वमा प्रभाव पार्छ । हिजोआज बजारमा विभिन्न किसिमका हेयर स्टाइल चलनचल्तीमा छन् । खासगरी, युवतीहरू आफूलाई स्टाइलिस देखाउन चाहन्छन् । फलस्वरूप बजारमा आइरहने स्टाइललाई उनीहरूले अपनाइरहेको पाइन्छ । त्यसैले, आफ्नो रूप, रङ, बनोट र स्वभावका आधारमा मनपर्ने हेयर स्टाइल राख्न सकिन्छ । जसले गर्दा स्टाइलिस देखिनुका साथै सहजसमेत ...